Akwụkwọ Cup Solution Factory | China Akwụkwọ Cup Solution Manufacturers na Suppliers
ADP-C800 Akwụkwọ Cup Ime Machine
The ADP-C800 ụdị igwe bụ nweta nkwalite ngwaahịa na isi na otu turnplate akwụkwọ cup igwe. Igwe ahụ nakweere imepụta cam na-emeghe, mezue nkewa nkewa, ihe nkedo gia, nhazi nke ogologo oge. Ya mere, ha nwere ike kesaa ọrụ nke ọ bụla. The dum igwe adopts Spgba lubrication, si otú belata akụkụ abrade, na ọ adopts Switzerland leister okpomọkụ maka iko ahu na ala akwụkwọ akara; Na sịlịkọn mmanụ eruba achịkwa PLC & akpa valvụ, na ngụkọta abụọ N'ezie f ...
AD-B600 Akwụkwọ Bowl Ime Machine
A ọhụrụ mepụtara si atọ uzo-efere ochie ụdị nnukwu efere igwe, oso a n'ichepụta ọsọ nke 50-60pcs / min. Mpempe akwụkwọ ịtụgharị mpempe akwụkwọ a na-enye ọtụtụ nhazi ọwa ma nwee ike ịme ọlsụ ihe ọ beụ PEụ na-ete mmiri Pee na abụọ. Na mgbakwunye na nke a, igwe ejikọtara na akpaka akwụkwọ a na-akpụ igwe na-agwakọta usoro nhazi ndị a niile: nri akwụkwọ, akara, mkpochapu ala, ịcha mmanụ, ikpo ọkụ, ịkpa ike, ịtụkọta na ịnakọta. Te ...
ADP-P650 Akwụkwọ Cup mbukota Machine
1. Pager na HMI na-achịkwa Packager ahụ. Ọ dị nnọọ ngwa ngwa ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ mgbe a gbanwere nha. 2. Nkiri akara: Ezi uche n'ibu Ọdịdị na pneumatic egbu ka mbukota akpa mbepụ-eji ire ụtọ na elu na-agba. 3. Enwere ike ijikọ ọkpọ ahụ na 4 setịpụrụ igwe iko akwụkwọ. 4. Ọ nwere agba akara nsuso ọrụ maka mbukota e biri ebi nkwakọ film. Nka na ụzụ nkọwa ADP-P650 Max. Mbukota Speed ​​16bags / min Max. Unwinding dayameta 300mm Irè ...
ACP-850 High Speed ​​Akwụkwọ Cup punching Machine
1. Wepụ omenala ewepụghị anwụ ịcha n'efu nwechapụ, punching si sample ozugbo, na sample ịkpụ bụ ezigbo, na-ukwuu belata ike oriri na manpower. 2. The igwe adopts ọkachamara elu-nkenke ọdịiche nri usoro na elu-ọsọ akpaka akwụkwọ nri, ifiọkde ezigbo akwụkwọ nri, ezi n'ọnọdu na idiocha akwụkwọ na-anata. Nka na ụzụ Nkọwapụta ACP-850 Max. Unwinding dayameta 1400mm punching Obosara 850mm punching Ogologo 300mm ...
APP-125 Akwụkwọ mkpuchi oghere na igwe ọkpọ gburugburu
Nka na ụzụ Nkọwapụta APP-125 Ihe 0.3mm-0.6mm ọkpụrụkpụ akwụkwọ nkọwa dayameta 30mm-200mm ma ọ bụ square, ụdị mpempe akwụkwọ Speed ​​50-100 ugboro ọdụ ọdụ kwa nkeji Cutcha Akwụkwọ Nha 65mm-125mm Ike 3KW Ibu 750KG Osisi Igbe Nkwakọ 2000mm * 1300mm * 1250mm Vidio
AD-B200 Akwụkwọ ịwụ akpụ Machine
Emeputa na nkwado zuru oke na ụkpụrụ mba ụwa, iko akwụkwọ a na-enwe ọhụụ na-arụ ọrụ nke ọma, nrụpụta ọkọlọtọ na ikike imepụta nke ọma. The akwụkwọ tub akpụ igwe bụ nnọọ na ọdabara na-eme ka popcorn iko, akwụkwọ tubs na ndị ọzọ. Iko emepụtara ya nwere ogo dị elu karịa 200mm. Aha Nka na ụzụ nkọwapụta Model AD-B200 Cup Size 30-190oz (1000ml-5000ml) (ebu exchangeable) Production ikike 25-35pcs / min Total Power 12KW Ikuku ikuku Re ...
APLD-600 Automatic Single Layer Akwụkwọ mkpuchi akpụ Machine
APLD-600 akwụkwọ mkpuchi igwe bụ anyị patent igwe, nke-eme ka otu oyi akwa akwụkwọ mkpuchi. Ọ bụ akpaka igwe na ọrụ ndị dị ka n'okpuru: Mpempe akwụkwọ mpịakọta akpaaka, na-emegharị (mee ka usoro ndu), emboss (nwere ike ime emboss, logo), ịkpụ obe (mee oghere maka ahịhịa), ọkpọ ọkpọ emeghe diski), akpaaka ndepụta diski na-akpụzi, kpo oku, mpịachi, knurling, na-agbapụta n'ahụ, na ibuga na tebụl maka nchịkọta. Aha Nka na ụzụ nkọwa Model APLD-600 P ...
APLD-60 Automatic Akwụkwọ mkpuchi akpụ Machine
APLD-60 Automatic Akwụkwọ mkpuchi akpụ Machine na-eji mmepụta a dịgasị iche iche ma ọ bụ akwụkwọ ihe lids.It ike nke na-amị lids maka akwụkwọ cup, akwụkwọ Mkpọ na ndị ọzọ na gburugburu akwụkwọ nkwakọ containers. Nkọwapụta teknụzụ APLD-60 Akwụkwọ Cover Cover Diamita 65-125mm (Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu nha, nwere ike ime max 137mm) Ihe Akụrụngwa Kwesịrị ekwesị akwụkwọ dị arọ 250-450gsm gosiri arụpụtaghị Max 55pcs / min Power 6.5KW Igwe Arọ 2800KG Na-arụ Ọrụ Ikuku Isi 0.4MPa Mbukota Size 2400 ...